Oranum.com kuuboonada qiimo dhimista & lambarrada ogeysiiska - Akhriska maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Articles > Oranum.com kuuboonada qiimo dhimista & summadaha ogeysiiska
Megan Waxaa laga yaabaa 9, 2019 Articles, rasiidhLeave a Comment on Oranum.com kuuboonada qiimo dhimista & lambarrada ogeysiiska
Akhriska cilmu-nafsiga wuxuu noqon karaa mid ka mid ah khibradaha ugu muhiimsan ee aad heli doonto. Sidoo kale waa mid aad u daacad ah, sidaa daraadeed wuxuu dareemayaa raaxo leh akhristaha waa muhiim. On orumum, waxaad heli kartaa joornaalo bilaash ah oo leh maskaxiyan ka hor intaadan ogolaanin inaad fadhiisato, si aad u hubiso haddii ay jirto xiriir ka hor intaadan sii wadin. Ma aha oo keliya, laakiin nafsiyadu waxay ku takhasusaan qaybo kala duwan, waxaana lagu baarayaa Oranum ka hor inta aan loo oggolaan inay bixiyaan akhrisyada.
Nidaamka Baaritaanka Dhimirka
Oranum wuxuu soo saaraa dhammaan cilmi-nafsiga si loogu ogolaado inuu ka shaqeeyo bogga internetka. Waa inay ku aflaxaan akhrinta imtixaanka oo waxay ku xiran yihiin inay bixiyaan muqaalka akhrinta qolka bilaashka ah marka la doorto sida maskaxda maskaxda leh ee saacadda. Waxaad nasiib u heli kartaa oo waxaad dooran kartaa inaad akhrisato sida akhriska demo bilaash ah.
Noocyada Maskaxda & Adeegyada
Oranum waxay bixisaa kaliya aqriska sawirada lagu sheekeysto. Waxaa jira qolal wada sheekeysi oo bilaash ah oo loogu talagalay dhammaan dadka isticmaala, laakiin markaad iibsato aqrisid, waxaad gali doontaa qolka wada sheekeysiga gaarka ah ee qofka maskaxda ah si aad si xor ah uga hadasho.
Waxaad arki kartaa oo maqli kartaa maskaxda aad la shaqeyneyso, laakiin waa inaad ku qortaa jawaabahaaga. Haddii aad galayso oranum telefoonka gacanta, ma heli doontid wax maqal ah, waana inaad aqrisaa oo aad gashaa dhamaan wada xiriirka.
Oranum wuxuu leeyahay xulasho ballaadhan oo maskaxeed iyo mowduucyo. Mawduucyada waxaa ka mid ah:
Jacayl iyo xiriir
Qiimaha & Bixinta Gaarka ah
GudbintaWaxa aad heleyso
Diiwaanka lacag la'aanta ah
9.99 LACAGTA BILAASH AH *
Kabadhada oranum ee la xidhiidha
Akhriska Maskaxda ee $ 0.15 Daqiiqadii laga bilaabo Jif…
Ku raaxeyso $ 13 Bonus Adeegyada ee Oranum
Hel dammaanad $ 22 bilaash ah markaad qortid, e…
Ka hel 23 Daqiiqo Daqiiqo ah $ 11 oo ka socda Mjh111 oo ku taal Oranu…
Akhriska Maskaxda ee $ 0.20 Halkii daqiiqo ee Mer…
18% Ka Fogow Aragtida Fog ee Fog - Ka noqo Dareenka…
Qaado 50% Adeegyada Adeegyada RaéeToth ee Oranum
68% Ka Dhimista Macaamiisha Cusub Wadahadal Toos Ah Oo Lacag La Siiyo, Telefoon Ca…
56% Ka Hortag Akhriska Maskaxda ee Koowaad ee StarryNyx ee Or
3 Min bilaash ah + 66% Off si aad ula tashato Maskaxiyan Oranu…
* Ugu dambeyntii la cusbooneysiiyay: April 2018
Qiimeeynta waxaa dejiya qof kasta oo maskaxiyan ah. Marmarka qaarkood maskaxiyadu waxay soo bandhigi doonaan iibka, waxayna bedeli karaan qiimaha ayaga oo u arkaan taam. Waxaad iibsan doontaa dhibcaha leh Oranum, ka dibna u isticmaal dhibcahaaga si aad u codsatid oo u galaan kulanno gaar ah.
Waa maxay caan ku saabsan oranum?
Isticmaalka fiidiyowga ee live video ayaa ka dhigaya Oranum marka laga reebo tartamayaashiisa. Munaasabadda bilaashka ah ayaa la bixiyaa saacad kasta by ruux maskaxeed oo kale, waxaad ku baran kartaa inaad akhrido akhristayaal badan kahor intaadan dooran inaad bixiso cashar.
Qaar ka mid ah cilmu-nafsiga qaarkood ayaa soo saara kuwan soo socda, waxaadna heli kartaa inaad ogaato martida kale ee joogtada ah ee jadwalkooda. Odayaasha sheekooyinka Oranum waxay leeyihiin muuqaal bulsheed oo xooggan, sidoo kale waxay abuureysaa boggan marka laga reebo goobaha kale ee akhrinta maskaxda.